Ny sorabe (سُرَبِ) dia abidy avy amin' ny abjady arabo (ajami) izay natao hanoratana ny fiteny eto Madagasikara, indrindraindrindra ireo fiteny ao tapany atsimo-atsinanan' i Madagasikara: ny fiteny antemoro (anteogny sy anakara). Fantatra fa isaina aman-jatony ireo lahatsoratra nosoratana tamin' ny alalan' io abidy io; ny tena tranainy amin' ireo lahatsoratra ireo dia nosoratana tany amin' ny taonjato faha-17 tany ho any.
Tamin' ny taonjato faha-18 dia fantatry ny foko rehetra eran' i Madagasikara sy nampiasainy io abidy io: tao Imerina dia nanafatra mpanoratra antemoro i Andrianampoinimerina mba hampianatra ny ankizy hamaky teny sy hanoratra. Izay no nahatonga an-dRadama I (ilay namorona ny abidy malagasy ankehitriny izay mifototra amin' ny abidy latina) nahay nanoratra sy namaky teny hatry ny fahazazany.
Mihevitra ny mpikaroka fa mety nisy tarehintsoratra hafa nampiasaina teto Madagasikara talohan' ny nisian' ny sorabe: ao amin' ny teny mamaritra ilay abidy amin' ny teny malagasy dia ahitana ny fototeny hoe soratra (avy amin' ny teny arabo) sy ny fototeny ho be. Izay tarehintsoratra nialoha ny sorabe izay dia mety avy any India, sahala amin' ireo tarehintsoratra ampiasaina ao Azia Atsimo-Atsinanana.
3 Votoatin' ireo tahirin-kevitra amin' ny sorabe
Mbola manadihady ny niandohan' ny sorabe ny mpikaroka. Ny hoe sorabe dia midika ara-bakiteny hoe "soratra lehibe" avy amin' ny teny arabo hoe sura ("soratra") sy ny malagasy be ("lehibe"). Ity anarana ity dia mety manondro ny fisian' ny rafi-panoratana teo aloha izay misy litera kely kokoa amin' ny fiteny sanskrita ampiasaina tany Azia Atsimo-Atsinanana araka ny asehon' ny teny malagasy sasany.
Araka ny nahazatra, ny mpikaroka dia nanombantombana fa tamin' ny alalan' ny fifandraisana ara-barotra nataon' ny Malagasy tamin' ny Arabo miozolmana no nampidirana ity rafi-panoratana ity. Ny fikarohana vao haingana anefa dia milaza fa io fanoratana io dia mety nampidirin' ny Javaney miozolmana. Misy fitoviana miavaka eo amin' ny asa soratra "Sorabe" sy "Pegon" (ny endrika javaney amin' ny soratra arabo).
Misy sora-tanana tranainy roanjato any ho any mbola tavela hatramin' izao, na dia tamin' ny taonjato faha-17 aza no nanoratana ny tranainy indrindra. Ireo Sorabe ireo dia mifatotra amin' ny hoditra ary ny soratra dia nomena anarana araka ny lokon' ny hoditra. Ny ankabeazan' ny soratra dia misy raikipohy majika saingy misy ihany koa ny soratra ara-tantara momba ny niandohan' ny foko sasany any amin' ny tapany atsimo-atsinanana amin' i Madagasikara. Voaresaka ao i ny tanànan' i Maka sy ny mpaminany Mohamady na dia tsy hita na aiza na aiza ao amin' ny lahatsoratra ny firesahana momba ny finoana silamo.
Niely manerana ny Nosy ihany koa ny Sorabe nanomboka tamin' ny taonjato faha-17, ary tamin' ny faran' ny taonjato faha-18 dia niantso ny mpanoratraa antemoro ny mpanjaka merina Andrianampoinimerina mba hampianatra ny ankizy ao an-dapany hamaky teny sy hanoratra. Izany no nianaran-dRadama I namaky teny sy nanoratra tamn' ny Sorabe hatramin' ny fahazazany.
Ankehitriny ny teny malagasy dia soratana amin' ny abidy latina, izay nampidirina tamin' ny taona 1823.
Ny abidy arabo dia nisedra fanovana sasany momba ny fanononana sy ny fanoratana mba handikana ny feo malagasy sasany. Soratana avy ankavanana miankavia ny Sorabe. Ny tsy fisian' ny fitsipika amin' ny fandikana ny teny malagasy ho amin' ny abidy arabo, izay mampiavaka ny sorabe, dia mahatonga ny famakiana ireo ny tahirin-kevitra voasoratra amin' ny sorabe ho sarotra sy tsy azo antoka.
Votoatin' ireo tahirin-kevitra amin' ny sorabeHanova
Ny Sorabe dia mandray anjara lehibe amin' ny tantaran' ireo foko silamo any amin' ny morontsiraka atsimo-atsinanana amin' i Madagasikara sy any Imerina. Miresaka momba ny fiavian' ireo foko any amin' ny faritra atsimo-atsinanana amin' i Madagasikatra ny Sorabe, indrindra ny Antambahoaka sy ny Antemoro. Voasoratra ao ny lovantsofina momba ny tantaran' ny foko sy fokom-pianakavian' ny Zafindraminia, ny Anteony, ny Antevandrika, ny Onjatsy, ny Sahatavy, ny Zafikazimambo,
Ny Sorabe dia mitantara ny dian-dRaminia avy any Maka ho any amin' ny morontsiraka atsinanan' i Madagasikara, ny fijanonjanonany, ny fahasahiranany amin' ny fiampitana, ny isan' ny fokom-pianakaviana nanaraka azy, ny fiverenany tany Maka, ny fakana an-keriny ny fahefana nataon' ny rahalahiny Andriandrakovatsy, ny fiverenany nankaty Madagasikara, ny fandosiran' Andriandrakovatsy zandriny sy ny fanenjehan' i Raminia azy, ny nankanesan' Andriandrakovatsy tany Imerina sy ny nanambady Vazimba.
Hita ao koa ny fresahana ny sikidy sy ny fanandroana ary ny finoana zavatra sy fanahy samihafa.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Sorabe&oldid=1044164"
Dernière modification le 24 Febroary 2022, à 13:31
Voaova farany tamin'ny 24 Febroary 2022 amin'ny 13:31 ity pejy ity.